……….. वास्तवमा यसकारणले गर्दा राष्ट्रको निमित्त यो घातक छ – झलनाथ खनाल,पुर्व प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता नेकपा (एमाले) Weekly Nepal
……….. वास्तवमा यसकारणले गर्दा राष्ट्रको निमित्त यो घातक छ – झलनाथ खनाल,पुर्व प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता नेकपा (एमाले)
December 14th, 2016 | by Weekly Nepal
०संविधान संशोधन नगरी नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुनै त्यस्तो सुत्र एमालेसँग छ ?
– तपाइले भनेको जस्तो कुनै सुत्र र जादुमन्त्रले समस्याको समाधान त हँुदैन, तर दलहरु एक आपसमा मिलेमा धेरै समस्याहरु समाधान हुन्छन् । हामीले जुन बेलामा संविधान घोषणा ग¥यौं, यो देशको प्रमुख पार्टी तथा अन्य अधिकांश पाटीहरु मिलेर ९० प्रतिशत भन्दा बढी भएकोले यो संविधान घोषणा गर्न सक्यौं । यो जनताको मेहनत सिङगो राष्ट्रको मेहनत हो त्यो मेहनतलाई कार्यान्वयन गर्ने रोक्ने यो धर्तीमा कुनै शक्ति छैन हामी आफै तिनै पार्टीहरु मध्ये कति पय पार्टीहरुले अनेक प्रकारका हल्ला र दबाबका आधारमा लम्पसार पर्ने बाहेक अरु कुनै शक्तिले यो संविधानलाई कार्यान्वयन नगरी रोक्ने आधार नै छैन, अहिले हामी दुःखकासाथ भन्न चाहान्छौ एकबर्ष अगाडि यो संविधान जुन ढंगले घोषणा गरियो जुन शक्तिद्वारा घोषणा गरियो, ति शक्तिहरु किन पछाडि फर्केर हेरिरहेका छन् ? संविधान कार्यान्वयनमा बाधा गर्न खोज्दैछन् हामीलाई आश्चर्य लागिरहेको छ, संविधान कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा ठूलो बाधा अवरोध देखिरहेका छौ ।
० प्रमुख तीन दल एक ठाउँमा उभिएर संविधान घोषणा गरेपछि मधेशमा जलेको आगो निभ्न निकै लामो समय लाग्यो त्यो आगो संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा निभ्यो अब संशोधन गरिएन भने फेरी त्यो आगो बाल्ने हो कि भन्ने आशंका त छँदैछ नि ?
– संविधान घोषणा गर्दाखेरि संविधान घोषणा गर्नु भन्दा अगाडी तपाईंले भन्नु भएको आगो बलिरहेको छ । त्यो आगो बल्दा बल्दै संविधान घोषणा गरेको हो । त्यो आगो संबिधान घोषणा गरिसकेपछि केहि अवधीमा निभ्यो त्यो कुनै सर्तमा निभेको होइन कस्ले कहाँ कुन सर्त ग¥यो, कुन सर्तमा कुन पार्टी फसेको छ, कसैले गुप्त सर्त गरेको छ भने हामीलाई थाहा छैन । तर यो तीन वटा पार्टीले एकान्त बसेर कुनै सर्तबन्दि गरेका छैनन् नेकपा एमालेले कसैसँग कुनै सर्त गरेको छैन । त्यसो हुनाले दृढतापुर्वक यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प थिएन कुनै बिकल्प छैन, कुनै बिकल्प रहेनेवाला पनि छैन ।
० मधेशी मोर्चाले जसरी संविधान संशोधन नगरेपछि हामी पुनःआन्दोलनमा उत्रिन्छौ भनेर चेतावनी दिएर हिँडरहेका छन्, अब चुनाब एक बर्षभित्र गरिनुपर्छ ती चुनाबहरुमा अबरुद्ध गर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्ले त संविधान कार्यान्वयन त अन्योलमै छन् त ?
– मधेसी मोर्चाको चेतावनीबाट लुगलुग तिग्रा कमाउने यो सरकार अहिले देशमा आगो बलिरहेको छ, संविधान संशोधनको प्रस्ताब मात्र दर्ता हुँदाखेरि नै देशमा आगो बल्न थालेको छ, देश द्वन्द्वतर्फ अगाडी बढेको छ, हेर्दै जानुस् केहि समयमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको उभार अगाडि बढ्छ । यो संविधानको संशोधन प्रस्ताब फिर्ता लिएँ भने देशव्यापी आन्दोलन हुन्छन् यसको जिम्मेवार को ? तपार्इँ हामीलाई भन्न जति सजिलो छ । कार्यान्वयन पक्ष पनि त्यतिकै असजिलो छ, त्यस विषयमा सबै दलले सोच्न आवश्यक छ ।
० मधेशी मोर्चासँग अघिल्लो सरकार पनि काँपेकै होइन र ? ३६ पटकसम्म वार्ता गरेको थियो केपी ओलीको सरकारले मधेसी मोर्चाको समस्या समाधान गर्नका लागि समस्या नै देखेर त समाधान गर्न खोजेको थियो होला ? कार्यदल पनि निर्माण गरेका थियो समस्या त थियो नि आखिर त्यतिखेर पनि हैन र ?
– ३६ पटक होइन ७२ पटक पनि वार्ता गर्न हामी तयार हुनुपर्छ । हामी अहिले पनि वार्ता गर्न तयार छांै यो एउटा अल्पमत हो । संसारभरि तपाई हेर्नुस् अमेरिका जस्तो देशमा ६६ प्रतिशतले संविधान जारी भयो । भारत जस्तो देशमा ६६ प्रतिशतले संविधान जारी हुँदा भारतमा बिरोध थिएन ? भारतका नेताहरुले बुझ्नुपर्छ दिल्लीबाट वक्तव्य निकालेर नेपालका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नेहरुले बुझ्नुपर्छ आफ्नै देशको इतिहास हेर, आफ्नै देशको इतिहास पढ, हिजो भारतको संविधान घोषणा गर्दाखेरि कति मानिसहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ? के भारतको संविधान त्यहीबेलामा संशोधन भयो ? संशोधन भएन संशोधन त हुन्छ तर समयक्रममा आवश्यकता अनुरुप, औचित्य अनुरुप संशोधन हुँदै जान्छ । हामी पनि संशोधनको बिरुद्ध छैन तर आवश्यक र औचित्यको आधारमा अहिले संविधान संशोधनको बेला होइन यो कुबेलाको सनाई बजाइरहेका छौं । सरकारले यो कुबेलाको सनाई बजाउन छोडेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जानुपर्छ सिँगो राष्ट्र एकताबद्ध हुन्छ तराईमा पनि हामी संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छौ अर्थात् निर्वाचन गर्न सक्छौ निर्वाचन कसले रोक्छ के भारत आउँछ रोक्न अथवा अरु कुनै विदेश आउँछ निर्वाचन रोक्नको लागि कसले रोक्छ ?
० विदेशी आएर भारतीय आएर निर्वाचन रोक्ला नरोक्ला तर यतिखेर संविधान संशोधनको मुद्दा छ, जुन प्रदेश नम्बर ५ अहिले उर्लिएको आन्दोलनको बाहेक अन्य मुद्दाहरु पनि संशोधनको लागि आवश्यक छैन ?
– छैन, अहिले हामी अरु कुनै भाषालाई नेपालका १२५ ओटा भाषा बाहेक अरुलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनु छैन । यो आवश्यक कुरै छैन सिमानंकन सबाल त हेर्नुस यो मुलुकको राष्ट्रिय एकताको बिरुद्धमा मात्रै छैन । सिमाङ्कन यतिबेला परिर्वन गर्ने हो भने हामीले प्रदेश सभाबाट स्वीकृति लिएर आउनुपर्छ । कुन चाँही प्रदेश सभा बनेको छ, र त्यहीबाट स्विकृति लिएर आएर यो सरकारले यो संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडी सा¥यो ? यस्तो खालको संविधान कै बर्खिलाप सोझै गएर देशको जनमतलाई बर्ग ल्याउने जुन प्रत्यन भैरहेको छ यो दुःखद्् हो ।
० यो संविधानको बर्खिलाप भन्नु भयो नि संविधान अहिले हाम्रो देशमा संक्रमणकाल जस्तो देखिएको छ सबै कुराहरु संविधान अनुरुप नै भैरहेको छ ?
– संविधान कार्यान्वयन सुरु भएको छ । कतिपय कुरा संक्रमणमा छ, संविधान संशोधन संक्रमणमा छैन । संविधान त हामीले जारी ग¥यो जारी भैसकेपछि संविधानका आफ्नै प्रक्रिया छन् । संविधानका कुन चाँही विषय संशोधन गर्ने यो संशोधन गर्ने विषय अनुसार हुन्छ । जुन बिषय सिमांकनको छ, त्यो सिमाङ्कनको बिषय प्रदेश सभाले अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा संबिधानमै किटेरै बोलेको छ, नि त्यो किटेर बोलेको कुरालाई किन नपढेको ।
० संविधानको कुरामा प्रदेश नम्बर ५ बिरोधी भयो, असंवैधानिक भयो भन्ने त आवाज ठीकै हो यसभन्दा अगाडी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तदेखि लिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै कुरा ग¥यौं, २५ सदस्य मन्त्रिपरिषद् बनाउने कुरा थियो, ४२ सदस्य बन्यो यस्ता धेरै कुराहरु संक्रमणकालिन अवस्थाको सदुपयोग गर्दै अथवा यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भनिएको छ, हामी सिमाङ्कनका कुरा चाँही किन असंवैधानिक भनेर बोलिरहने ?
– संक्रमणमा कुन–कुन विषय पर्छन् कुन–कुन पर्दैन त्यो कुराको बारेमा पनि त छलफल गर्नुपर्छ नि । त्यो सहमतिमा नपुगी सरकारलाई जे जे मन लग्यो त्यही गर्न पाइन्छ ? प्रतिपक्षसँग बसेर छलफल गरेर एउटा सहमतिमा बनाएर जाने कुरा हो प्रतिपक्षका बिरुद्ध एउटा सिँगो राष्ट्रलाइ डिभिजन गरेर सिंङगो राष्ट्रलाई धु्रवीकरणतर्फ लाने तनाब र संघर्षतर्फ लाने यस प्रकारका प्रयत्न भनेको नितान्न राष्ट्रघाति पनि छन् । राष्ट्र बिरोधी पनि छन्, संविधान लोकतन्त्र बिरोधी पनि छन् ।
० तपाईंले भने जस्तो राष्ट्रघाति कसरी भयो ?
– यो देशमा हामीले जुनसुकै प्रदेशको संरचना निर्माण गरे पनि पहाड र तराईलाई छुट्याउन हँुदैन । पहाड र तराईलाई छुट्याउनु पर्छ, पहाड र तराईलाई अलग अलग बनाउनु पर्छ भन्ने मधेसी मोर्चाको माग हो । समग्र मधेश एक प्रदेश उनीहरुको माग हो । अहिले मधेश प्रदेश टुक्राटुक्रा भएर पनि मधेश प्रदेश लिने २ नम्बर भएकै छ अब फेरी प्रचण्ड जस्तो मान्छेहरुसँग मिलेर उतापट्टि त्यो पश्चिम तराईको अर्को भाग दिने अनि फेरी आन्दोलन गर्दै जाने उहाँहरुको रणनीति त्यो हो । महन्त ठाकुरले बडो प्रष्टका साथ भन्नु हुन्छ कि वार्ता गर्दा (हामीहरुको माग एउटै छ, “एक प्रदेश एक मधेश” तपाईंहरुको यो कुरा मान्नु हुन्छ त मान्नुहोस् नत्र वार्ताको कुनै औचित्य छैन भनेर भन्दै गर्दा मधेश प्रदेश नछुट्टाएसम्म हामी सहमत हुन सत्तैmनौं भनेर महन्थ ठाकुरले वार्तामा पटक पटक भन्दै आउनुभएको छ ।)
० अब यो दुई नम्बरको प्रदेशको विषयमा हिजो सहमति जनाउँदाखेरि तपाईहरुले यो बिषय सोच्नु भएन भोलि फेरी अर्को ठाउँमा पनि आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्छ र ?
– एकदम सोचेको हो वास्तवमा २ नम्बरको प्रदेशलाई अहिले जुन सिमानामा प्रदेश बनाइएको छ त्यो प्रदेश बनाउने कुरा मलाई भन्नु हुन्छ भने त्यो एउटा कमजोरी हो । हामीले गरेको एउटा गल्ति हो तर त्यो गल्ति गरेर पनि सबैलाई समेट्न सकिन्छ । सबै मिलेर जाने एउटा स्थिति हुन्छ भने लौ भैगो भनेर छोडियो । हामीले यो छोड्ने कुरा हाम्रो कमजोरी हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । तर, त्यो जुन ढङ्गले बन्यो अब त्यसलाई नै विस्तार गर्दै जाने अर्को अभियान चलेको छ, त्यो विस्तार गरेर जाने त्यो अभियान छ त्यसमा सरकार सहयोगी भैरहेको छ, सत्तारुढ दलहरु सहयोगी भइरहेको छ, यसकारणले गर्दा राष्ट्रको निमित्त यो घातक छ हामी भनिरहेका छौ ।
० तर मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरुले हामीलाई यति प्रदेश यति सीमा भएको क्षेत्र हामीलाई चाहियो भन्दाखेरी सिधै राष्ट्रघाती हुदैछ कि सोच्नु पनि गल्ति होइन र ?
– बिल्कुल होइन, किनभने यो देशको राष्ट्रिय एकतालाई कसरी बचाउने हामी दुईवटा ठूल्ठूला समस्याका बीचमा छांै । हामीले हाम्रो देशको एकताको कुरालाई सार्वभौमसत्ताको कुरालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रको कुरालाई धेरै बिषयबस्तुहरु सोचेर अगाडी बढ्नुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौम कसरी बचाउने भन्नेमा हामी आफै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र धेरै गम्भीर मोडमा छ । कतै आन्दोलन, कतै आन्दोलनको तयारी त कतै दलबीच मनमुटाव । त्यसकारण हामी हाम्रो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ जोड दिन आवश्यकता छ । हाम्रो संस्कार जस्तै भइसकेको छ, सत्तामा पुगेपछि भारतसँग बढी झुकाव राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । छिमेकी राष्ट्रसँग नजिक हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन तर हदैभन्दा भेदै लचक हुने हाम्रो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आवश्यकता छ । यो बिगतमा जे भैरहेका छन् यो २०६२÷०६३ परिवर्तनपछि हामीले जुन संविधान बनायौं यो संविधान हामी सबैले टेकेर उभिने धरातल हो । यो धरातलले हामीलाई के भनेको छ भने नेपाल एउटा स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अखण्डताले युक्त राष्ट्र हो । त्यो धर्तीमा टेकेर हामीले नेपालका सम्बन्धलाई स्वतन्त्र रुपले अगाडी बढाउनु पर्छ र राष्ट्रिय एकतालाई प्रर्वद्धन गर्ने खालका नीति लिनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौ । त्यसअनुरुप हामी बिदेशी नीति हुनुप¥यो, देश अनुरुप साझा विदेश नीति हुनुप¥यो, एकीकृत बिदेशी नीति हुनु प¥यो, कांग्रेसको एउटा माओवादीको एउटा एमालेको अर्को बिदेशी नीति हुनु भएन । यसबारेमा खोइ सरकारले प्रयत्न गरेको अब प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ एकातिर एक खालको विज्ञप्ती निकाल्नु हुन्छ । अब त्यस्तो बिज्ञप्तीमा हिजोका कतिपय मूल्य र मान्यताहरु खण्डित भएका हुन्छन् । यस प्रकारका काम गर्नु भएन । हामीले एकीकृत ढङगले विदेश नीति बनायौं भने हाम्रो राष्ट्रसँग सम्बन्धित बिषयमा कसैले पनि तलमाथि गर्नु पर्दैन ।
० एउटा भन्छ अब दुई राष्ट्र हुँदा पनि हुने मधेश राष्ट्र तराई राष्ट्र बनाउँदा पनि हुने यस्तो हुन्छ ?
– नेपालमा ठूला संकट आइलाग्छ राजनीतिक संकटहरु त्यतिखेर दलहरु मिलेर अगाडी बढेका त देखेका छौं । त्यहि दलहरु मिलेर अगाडी बढ्दा पार्टीगत स्वार्थहरु बढी जोडिएका हुन्छन्
० जनतासँगका स्वार्थहरु कम जोडिएका हुन्छन् भन्ने आरोपहरु पनि आउने गरेका छन् नी ?
– नेपालका पार्टीहरुसँग एउटा विषेशता छ, हेर्नुस हामीले ०६२÷०६३ को पुष्ठभूमिमा हामी सम्पूर्ण राज्य पार्टीहरु एकताबद्ध भयो, त्यो कारणले ०६३÷६३ को जनक्रान्ति भयो । हामीले संविधानसभा निर्वाचन गर्ने बेलामा पनि सम्पूर्ण मेजर पार्टीहरु एकताबद्ध भयो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो राजतन्त्र उल्लंघन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी सबै पाटीहरु एकताबद्ध भयौं हामी तिन प्रमुख पार्टीहरु एकताबद्ध भएपछि संविधान घोषणा भयो । यतिबेला यी समस्याहरु किन नदेखेको यी पार्टीहरुले अहिले कार्यान्वयन गर्ने बेलामा झन् बढी एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता परेको बेलामा फेरी लम्पसार लत्रिने किन ? यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पो घडी हो त यो घडीमा एकताबद्ध भएर कार्यान्वयन गरेर देखाउन तब पो सिँगो विश्वले एउटा स्वाधीन एउटा स्वाभिमान एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन एउटा अखण्डतायुक्त नेपाल राष्ट्र अब साँच्चिनै लोकतन्त्रको बाटोमा बढ्यो भनेर सारा संसारले देख्न सक्छ, सारा संसारलाई देखाउने हिसाबले हामी किन अगाडी जान नसक्ने ।